Fursadaha Shaqada | Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Riix Halkan si aad Hadda Codsato! »
Xarunta Caafimaadka Sadler waa shaqo-bixiye loo siman yahay oo bixisa shaqooyin adag, buuxin iyo abaal-marinno leh kuwa ay ka go’an tahay inay bixiyaan adeegyo daryeel aasaasiga ah oo tayo leh, ilkaha iyo taageerada kuwa u baahan.
Waa siyaasadeena inaan siinno shaqo fursad siman dhammaan shaqaalaha iyo codsadayaasha shaqo. Ma jiro qof ka shaqeeya, ama codsanaya shaqo, Xarunta Caafimaadka ee Sadler ama xarumaha la xidhiidha waa in lagu takooro shaqada sababtoo ah jinsiyad ama koox, diin, midab, abtirsiin, goobta dhalashada, jinsiga, da’da, asal qaran, aan ahayn- naafada ama naafanimada la xiriirta shaqada, xaaladda guurka, goobta dhalashada ama dookh/ujeedka galmo.
Hadafkayagu waa horumarinta caafimaadka bulshadeena anagoo bixinayna daryeel isku dhafan, tayo sare leh iyo naxariis leh. Shaqaale daacad ah, daacad ah oo si fiican u tababaran waxay soo dhaweeyaan bukaanka iyada oo aan loo eegin awoodda ay wax u bixin karaan. Waxaan ku dadaalnaa inaan kor u qaadno tayada nolosha bukaannadayada iyo shaqaalaheenna annaga oo adeegsanayna dadaallada horumarinta tayada joogtada ah. Himiladayada waxa lagu rumeeyaa ka go’naan xoog leh iyo taageero ka imanaysa la-hawlgalayaasha bulshada ee dhiirigeliya iyo ku hawlan.
Dhammaan codsiyada shaqooyinka waqti-buuxa ah waa in laga helaa ADP.
Dib u eeg shaqooyinka noo furan oo hadda ka dalbo xidhiidhka sare.
Xarunta Caafimaadka ee Sadler » Nagu saabsan » Fursadaha Shaqo